shankalay13: April 2010
ခရီးသွားမှတ်တမ်း = ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ဖူးဂိ...
အပိုပစ္စည်းကို ပြန်ပြီး Recycle and Reuse လုပ်တာပါ ...
ခရီးသွားမှတ်တမ်း = ဇင်းမယ် သင်္ကြန်
ချစ်တာနဲ့ကြိုက်တာ ကွာခြားချက် (မိန်းကလေး သဘာဝ ?)...
အတာ သင်္ကြန်မှာ အားလုံးပျော်ရွှင်ပါစေလို့ကျနော်ဒီကေ...
ခရီးသွားမှတ်တမ်း = ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ဖူးဂိတ် (phuket)
ဒီခရီးစဉ်ကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သွားတာက အရင်နှစ်တုန်းကပါ။ တင်မယ်တင်မယ်နဲ့မတင်ဖြစ်လို့ခုတော့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖူးဂိတ်ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လည်စရာနေရာ အဖြစ်ကျော်ကြားတဲ့ မြို့ နယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒိုင်တန်းနစ် မင်းသား လော်နယ်ဒိုတောင် ဒီနေရာမှာ The Beach ဆိုတဲ့ စက်ကားလာရိုက်သလို James Bond Island ဆိုပြီးတော့ တောင်ရှိပါတယ်ဗျာ။
တောင်ပိုင်းကိုတော့ လေယာဉ်နဲ့ သွားတယ်လေ။ လေယာဉ်ခ ဘယ်လောက်လဲဆိုတာတော့ မေ့သွားပြီဗျာ။ မှတ်မိတာကတော့ အဲဒီတုန်းက မိုးတွင်းဖြစ်နေတယ်လေ။
ပြောတာပြောတာ... နွေရာသီမှာ ရေပူစမ်း၊ မိုးရာသီမှာ ပင်လယ်၊ ဆောင်းရာသီမှာ စကိတ်စီး ဆိုသလို ကျနော်တို့ လဲ မိုးရာသီမှာ ပင်လယ်သွားလည်တယ်လေ။ မိုးရွာလို့ လားတော့ မသိပါဘူး..ရေတော့ သိပ်မကြည်ဘူးဗျ။
အောက်ကပုံကတော့ ဖူးဂိတ်ရောက်ခါနီး ရှုခင်းပါ။ လေယာဉ်ပေါ်ကနေရိုက်ထားတာလေ... မိုးကနဲနဲ ရွာနေတော့ မြင်ကွင်းက သိပ်မရှင်းဘူးဗျ။
ကျနော်တို့ သွားလည်တဲ့ ကမ်းခြေက ပါတောင်း လို့ ခေါ်တယ်။ လူတော်တော်လေးစည်တဲ့ နေရာပေါ့ဗျာ။ လေယာဉ်ကွင်းနဲ့မြို့ နဲ့ က နဲနဲ ဝေးတယ်။ ကမ်းခြေနဲ့ ဆိုရင်တော့ တော်တော်လေးကို ဝေးပါတယ်။
ဖူးဂိတ် လေယာဉ်ကွင်းပြီးရင် ဖူးဂိတ်မြို့ ကို ရောက်တယ်။ မြို့ ကိုကျော်ပြီးရင်တော့ ကမ်းခြေကိုရောက်တယ်ဗျာ။ လေယာဉ်ကွင်း မှာတော့ ကားတွေတော်တော်များများရှိပါတယ်။ ကမ်းခြေကိုသွားရင်တော့ အနည်းဆုံး 600 ပေးရတယ်။ 700 ကျော်ရင်တော့ အပြုတ်ခံရ ပြီလို့ တာ မှတ်ပေတော့ဗျာ။
ကျနော်တို့ ကို ကမ်းခြေသွားဖို့1500 တောင်းတယ်ဗျ။ ဒါပေမယ့် မလိုက်ဘူး။ မလိုက်တော့ 800 နဲ့ လိုက်မလားဆိုပြီးလာခေါ်တယ်။ အဲဒါနဲ့ကျနော်တို့ လဲ လေယာဉ်ကွင်းအပြင်မှာ ကားစောင့်တော့ ကားတစီးမှ မရှိဘူး။
အဲဒါနဲ့ ပဲ လေယာဉ်ကွင်းမှာ ပြန်လာပြီးတော့ ကမ်းခြေကို 650 နဲ့ ဈေးစစ်ပြီးပါသွားတယ်။ ကမ်းခြေကို လေယာဉ်ကွင်းကနေ 45 မိနစ် ကျော်ကျော်သွားရပါတယ်။
အောက်ကပုံကတော့ လေယာဉ်ပေါ်က ရိုက်ထားတဲ့ ရှုခင်းပါပဲ။
အဲလိုနဲ့တည်းရမယ့်နေရာကို ရောက်သွားတယ်လေ။ အခန်းကတော့ အောက်က ပုံအတိုင်းပါပဲ.. တစ်နေ့ ကို 1250 ပေးရပါတယ်။ မနက်စာ အပါအ၀င်ပေါ့ဗျာ။
ဒါကတော့ သွားစားတဲ့ Sea Foods ဆိုင်ပေါ့ဗျာ။ ပုံအတိုင်းစားရင်တော့ 2000-3000 ကျော်ပေးရပါတယ်။ မလန့် ပါနဲ့စားလို့ တော့ တော်တော်လေးကို ကောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ နေရာက နိုင်ငံခြားသားတွေ လာလည်တဲ့နေရာလေ.. ဒါကြောင့် ဒီလောက်ဈေးကြီး တာပေါ့ဗျာ။ ကျနော်တို့ လဲ နိုင်ငံခြားသားပဲဟာ....
(အဲ ထိုင်းလိုတူတဲ့ လူတွေသတိထားရမယ်နော်။ Night Club တွေကိုသွားရင် Shoe တွေစီးရတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်က ထိုင်းနဲ့ မတူရင် စွတ်ကြယ်ဝတ်သွားရင်တောင် ဘာမှမဖြစ်ဘူးဗျာ။ )
အဲဒီလှေတွေကိုတော့ စီးလို့ ရတယ်နော်။ နာရီဝက်ကို 1500 ပေးရပါတယ်။ ရောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ မြန်မာလို ပြောလို့ ရပါတယ်။ အဲဒီမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူအများအားဖြင့်တော့ မြန်မာပြည်က လူတွေသာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
ဒီလိုမျိုး လေထီးစီးရင်တော့ တစ်ပတ်ကို 1000 ပေးရပါတယ်။ 10 မိနစ်လောက်ပေါ့ဗျာ။
အပေါ်ကပြောခဲ့တာတွေက နေ့ လယ်နဲ့ညနေခင်းပိုင်း လုပ်လို့ ရတဲ့ဟာတွေလေ။ ညပိုင်းရောက်ရင်တော့ ဘန်ဂလို လမ်းဆိုပြီးရှိတယ်ဗျ။ အားလုံးလိုလို အဲဒီကိုပဲလာကြတယ်။
ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ ဒီနေရာက လူတွေလာလည်တဲ့နေရာလေ။ ယာဉ်ဖြတ်တန်းခွင့် မရှိတဲ့ နေရာပေါ့ဗျာ။ အောက်က ပုံကတော့ promotion လုပ်နေကြတာလေ။
ကဲ ဒီလိုမျိုး လျှောက်လည်တဲ့သူများတွေလဲ ရှိပါတယ်ဗျာ။
ပြီးတော့ ဒီလိုအကောင်တွေကို ချီပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးတဲ့သူများလဲ ရှိပါတယ်။ (သတိပေးချင်တာက ကိုယ်မကြိုက်ရင် မကြိုက်ဘူးလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောစေချင်တယ်။ ကိုယ်က အကောင်ကိုရိုက်ထုတ်လိုက်သလိုမျိုးလုပ်ရင် ပိုင်ရှင်က မကျေမနပ်ဖြစ်ပြီး ရန်ရှာတာတွေရှိတယ်။
ရန်ရှာတာကလဲ.. အဖွဲ့ နဲ့ လေ။ ပြီးတော့ အားလုံးလိုလိုမှာ ဓါးတိုလေးတွေရှိတယ်။ ချပြီဆိုရင် ၀ိုင်းပြီးချကြတာ။ ပြီးရင် ဓါးနဲ့ထိုးတယ်။ ရဲတွေကလဲ သိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာမှမလုပ်ဘူး။ အချင်းချင်းပြောပြီး ပြီးသွားတာပဲ။
အဲဒီနေရာက အမဲရောင်နယ်မြေလို့ ပြောလို့ ရတယ်။ သတ်ပြီးရင် ပြီးသွားတာပဲ ဘယ်သူမှ မလိုက်ဘူး။ နေ့ စဉ်နေ့ စဉ် လူအ၀င်အထွက်က ထောင်နဲ့ ရှိတော့ ရဲလဲ သိပ်အလုပ်မလုပ်ဘူး။ မကြောက်ပါနဲ့သတိပေးရုံလေးပါ)
ဒါကတော့ ဘီယာဆိုင်ပေါ့လေ။ ပုံအတိုင်းပေါ့ဗျာ။ တစ်လုံးကို 100 ပေးရတယ်ဗျ။ (ဈေးကြီးဆို နိုင်ငံခြားသား လည်တဲ့နေရာလေဗျာ။ ) အဲတစ်ချို့Night Club မှာတော့ တစ်လုံးကို 200 ပေးရတယ်။ ကောင်မလေးတွေ ကိုယ့်အနားလာရင်တော့ သူတို့ သောက်ဖို့ အတွက် တစ်ခါကို 200-300 ပေးရတယ်နော် ဆရာတို့ ။
ဘန်ဂလို လမ်းတစ်လျှောက်ဟာ ဒီလို ဘီယာဆိုင်တွေမိုလို ရှိပါတယ်။ ခက်တာက အမြည်းမရှိဘူးဗျ။ စားပြီးမှ သောက်တတ်တဲ့ လူတွေအတွက်တော့ တော်တော်လေးကို ဟန်ကျတယ်ဗျာ။
ပြီးတော့ ဒီလို ကောင်မလေးတွေတော်တော်လေးကို များပါတယ်။ အနိပ်ခန်းတို့တွေက တကယ်တော့ ခန္ဓာရောင်းတဲ့ နေရာဖြစ်နေတယ်။
ဒီလိုမျိုး ဘားတိုင်မှာ ကတာလဲရှိတယ်နော်။ အားလုံးလိုလို သဘောတူတာကတော့ ဒါက Sin CIty ပေါ့ဗျာ။
အောက်ကပုံကတော့ ဘာဆိုလိုမှန်း မသိပါဘူး။ ကျနော်ကတော့ Organic ထိပဲနားလည်တယ်။ အောက်ဆုံးကဟာတော့ နားမလည် ဘူးဗျာ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ။ ငြင်းလို့ မရတာကတော့ အောက်ကလိုမျိုး ရှုခင်းလှလှလေးတွေရှိတယ်လေ။
ဒီအောက်ပုံကတော့ ကျနော့်ရဲ့ရိုက်ချက်လေးပေါ့။ လှတယ်ဟုတ်?။
Posted by Shankalay or Sai Sai at 6:41 AM No comments:
အပိုပစ္စည်းကို ပြန်ပြီး Recycle and Reuse လုပ်တာပါ အချစ်ရာ
အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသမီး အိမ်ပြန်ရောက်လာသော အခါ မိမိယောင်္ကျား တခြား အမျိုးသမီးနှင့် အိပ်နေသည်ကို တွေ့ သောအခါ ဒေါသဖြစ်စွာဖြင့် ပြန်ထွက်သွားရန်ပြင်သော အခါ ယောင်္ကျားဖြစ်သူက ဟန့် တားကာ
ယောင်္ကျား။ ။ “ကိုယ်ရှင်းပြတာကို နားထောင်ပါအုန်းကွာ”
မိန်းမ။ ။ “ ဘာတွေရှင်းပြ မလို့ လဲ... မြန်မြန်ပြော”
မိန်းမ၏ ခွင့်ပြုချက်ရသည်နှင့် ယောင်္ကျားဖြစ်သူက အလျင်အမြန်ပင် ဖြေရှင်းချက်ကို ပြောပြတော့သည်။
ယောင်္ကျား။ ။ “ကိုယ်အလုပ်ကပြန်လာတော့ ဒီမိန်းကလေး လမ်းဘေးမှာ ယိုင်တိယိုင်တိုင် လမ်းလျှောက်လာတာကိုတွေ့ လို့ကားပေါ်တင်ပြီး အိမ်ခေါ်လာတာပါ။ အိမ်ရောက်တော့ သူက ဗိုက်ဆာတယ်ဆို လို့မင်းမစားချင်တော့ဘူး ပြောတဲ့ အမဲသားကို ကိုယ်က ချက်ကျွေးလိုက်တယ်။ ”
မိန်းမ။ ။ “ဒါနဲ့ ဘာဆိုင်လို့ လဲ?”
ယောင်္ကျား။ ။ “နားထောင်ပါဦးကွာ... ပြီးတော့ သူစီးတဲ့ဖိနပ်က ပြတ်နေတာကို တွေ့ တော့ ကိုယ်လဲ မင်းတခါပဲစီးပြီး မစီးချင်တော့ဘူး ပြောတဲ့ ဖိနပ်ကို ပေးလိုက်တယ်။ ”
မိန်းမ။ ။ “ပြီးတော့ကော”
ယောင်္ကျား။ ။ “ပြီးတော့ ဒီမိန်းကလေးက ညစ်ပတ်ပြီးမွဲနေတဲ့ အ၀တ်အစားကို ၀တ်တာကိုတွေ့ တော့ ခေတ်နဲ့ အညီမဖြစ်ဘူး မလှဘူး ဆိုပြီးတော့ မင်းမ၀တ်တဲ့ အ၀တ်အစားတွေကို သူ့ ကိုပေးဝတ်လိုက်တယ်။”
မိန်းမ။ ။ “တော်တော်... ဒါတွေအားလုံးက ကျမသီးခံလို့ ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ရှင်က သူနဲ့ ဘာလို့ အိပ်နေရတာလဲ?”
ယောင်္ကျား။ ။ “ အော်...ဒါကတော့ သူက ကိုယ့်ကို “ရှင့်မိန်းမအနေနဲ့စိတ်မ၀င်စား၊ မသုံးတာဘာကျန်သေးလဲ” လို့မေးလို့ ပါကွာ”
Posted by Shankalay or Sai Sai at 6:23 AM No comments:
အမျိုးသမီး ၁။ ။ “ကျမတို့လင်၊မယား နှစ်ရှည်လများ ငြင်းခုံကြတဲ့ ပြဿနာတော့ အတွင်းရေးမှူးမလေး အသစ်ခန့် လိုက်တော့မှ အဖြေ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရတော့တယ်”။
အမျိုးသမီး ၂။ ။ “ ဟယ်..ဒါဆို သူတော်တော်လေးကို တော်မှာပဲနော်?”
အမျိုးသမီး ၁။ ။ “ တော်တော့ပေါ့ရှင်။ ကျမနဲ့ကျမယောင်္ကျားနှစ်ပေါင်း ၃၀ လုံးလုံး နင်ကမြုံနေတာ၊ ငါက မြုံတောနဲ့တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်အပြစ်တင်နေကြတာ။”
အမျိုးသမီး ၂။ ။ “ခုတော့...”
အမျိုးသမီး ၁။ ။ “ အင်းမြုံတာက ကျမဖြစ်နေတာကို ခုမှပဲသိတော့တယ်ရှင်”
အမျိုးသမီး၂။ ။ “ဘယ်လို လုပ်သိတာလဲ? ဆရာဝန်သွားပြလိုက်လို့ လား?”
အမျိုးသမီး ၁။ ။ “မဟုတ်ပါဘူးရှင်။ အသစ်ခန့် လိုက်တဲ့ အတွင်းရေးမှူးမလေး ကိုယ်ဝန်ရနေပြီလေ” တဲ့။
Posted by Shankalay or Sai Sai at 5:53 AM No comments:
ကဲ...ကျနော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း စာဖတ်သူများကို သင်္ကြန်ဓါတ်ပုံလေးတွေတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ဇင်းမယ် (Chiang Mai) ရောက်တုန်းက ရိုက်လာတဲ့ဓါတ်ပုံလေးတွေပါဗျာ။
ဒီ အပေါ်ပုံကတော့ သင်္ကြန်အတွင်းကောင်းမှုလုပ်လိုသူများအတွက် အဆင်ပြေအောင် ဘုရားကို ပင့်ထားတာပါ။ ကုသိုလ်လုပ်ချင်သူ များအနေနဲ့ဘုရားဆင်းထုတော်ကို ရေပူဇော်နိုင်ပါတယ်။ သင်္ကြန်ဆိုတာက အညစ်အကြေးတွေကို ဆေးကြောဖို့ အတွက်ဆိုလေ။ ဒါကြောင့် ဘုရားဆင်းထုတော်ကို ရေကပ်ကြတာပေါ့ဗျာ။
ဇင်းမယ်က အရင်တုန်းက ကျုံးပတ်လည်ဝိုင်းထားတဲ့မြို့ ပါ။ ဒါကြောင့်ခုချိန်ထိ ကျုံးကိုတွေ့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကျုံးရှိတဲ့အတွက် ကြောင့်ပဲ သင်္ကြန်ဆိုရင် လူတွေက ဒီမှာပဲ လာပြီးရေကစားကြတယ်လေ။ (ရေအလွယ်တကူရတာကိုးဗျ) အဲ..ရေပတ်ခံကားနဲ့ လာတဲ့သူများ ရှိရင်လဲ ရေကုန်ရင် ကန်ထဲမှာပဲ ဆင်းခတ်ကြတယ်လေ။ (ပုံပါအတိုင်း)
ရေရပြီးရင်တော့ ပုံထဲက အတိုင်း ရေခဲလေးနဲနဲထည့်တယ်လေ။ အဲဒါမှ “သင်္ကြန်မှာ အေးချမ်းစွာရေကစားလို့ခိုက်ခိုက်တုန်နေ ပျိုမေတွေ” ဆိုပြီးဖြစ်သွားမှာလေ။
ဒါကတော့ ရေခဲရောင်းနေတဲ့သူများပါဗျာ။ ရေးထားတာကတော့ “ရေခဲရောင်းသည်။ ရေပါ အလကားဖြည့်သည်” ပေါ့လေ။
ရလာတဲ့ ရေခဲရေကို (မြန်မာပြည်မှာလို တစ်ခွက် 50 မရောင်းပါဘူး) ဒီလိုလောင်းလိုက်တော့ အလောင်းခံရတဲ့သူက ဒီလို တုန့် ပြန်တယ်လေ။ ကြည့်လို့ တော့အကောင်းသား။ သူခံကိုယ်ခံပေါ့ဗျာ။
လာလည်တဲ့သူများကလဲ ဒီလိုပဲ စည်စည်ကားကားရှိပါတယ်။
အောက်ကပုံကတော့ လမ်းဘေးက ဈေးသယ်တွေပါ။ ဒါပေမယ့်သူတို့ ကလဲ ရေကစားတယ်လေ။ အသေးစား မန်းတတ်ပေါ့ဗျာ။
လာလည်တဲ့သူတွေကလဲ အမျိုးမျိုးလာလည်တယ်ဗျာ။ အောက်က ပုံလိုမျိုးကားနဲ့ လာလည်တာလဲရှိတယ်လေ။
ဒီလို လမ်းလျှောက်ပြီး ရေပက်ခံတာလဲရှိတယ်လေ။
ရေမသန့် ဘူး ဆိုပြီး ဒီလို တုန့် ပြန်တာလဲ ရှိတယ်ဗျ။
အောက်က ပုံလိုမျိုး အဆိုကျော်လုပ်ပြီး ပြည်သူတွေကို ဖော်ဖြေတာလဲ ရှိတယ်လေ။
အဆို၊ အတီး နဲ့အတူတူ ဒီလို ကကြတာကလဲ ရှိပါတယ်။ (ကျနော်တောင် အားကျလို့ ဝင်က သေးတယ် ဟဲဟဲ)
အင်း......ဒီလို မျိုး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကျေနပ်တဲ့သူလဲရှိတယ်ဗျာ။
အဲ...........အောက်က ပုံအတိုင်း မြူးမြူးကြွကြွ ပျော်ရွှင်ကြတဲ့သူများလဲ ရှိပါတယ်။
ဒါကတော့ ......... ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ထိုင်းမလေးတွေ ပေါ့လေ။
အောက်ကပုံကတော့ အမာခံ တပ်သားတွေပေါ့ဗျာ။ ဘယ်လောက်ပဲအေးအေး ရေကစားတာ သူတို့ တွေပါဗျာ။
ကြည့်ပါလားလို့အင်တိုက်အားတိုက်ပါပဲ။ ရဲရဲတက် ရဲရဲချေမှုန်း ဆိုသလိုပါပဲလား။ (အချစ်လဲ အဲလိုလုပ်ရမယ်တဲ့ ကျနော့်ဆရာက ပြောတယ်)
မောပြီးပန်းပြီဆိုရင်တော့ အောက်ကပုံအတိုင်း ရေထဲမှာ ဆင်းကူးကြတာပေါ့ဗျာ။
ဒါမှမဟုတ် အောက်က ပုံအတိုင်း ရေချိန်မှန်ပြီး မှေးလိုက်တာပေါ့လေ။
ရေဘယ်လောက်ဆော့ကြလဲဆိုတော့ ဒူးခေါင်းလောက်နက်တဲ့ လမ်းဘေးက ရေကိုပဲ ကြည့်ကြပါတော့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်များရယ်။
ရှမ်းကလေး (တော်တော်လေးကို ပျော်စရာကောင်းတဲ့နေရာလေးပါ။ စာဖတ်သူများ အခွင့်ကြုံရင် သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ပါတယ်ဗျာ။ )
Posted by Shankalay or Sai Sai at 6:37 AM No comments:
ဆရာဝန်များ အစည်းအဝေးခန်းမှာ ထွက်လာသော ဆရာဝန်က “ကျနော်ခင်ဗျားအတွက် သတင်းကောင်းရှိတယ်ဗျာ”
လူနာ။ ။ “ကျနော်နားထောင်နေပါတယ်ဆရာ”
ဆရာဝန်။ ။ “ အင်း........ဆရာဝန်အားလုံးက ခင်ဗျားဆီက ဆေးကုသစရိတ်မကောက်ခံဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဗျ။ ”
လူနာ။ ။ “တကယ်လားဗျာ.......”
ဆရာဝန်။ ။ “ တကယ်ပေါ့ဗျာ“
လူနာ။ ။ “ဘာဖြစ်လို့ လဲဗျ?”
ဆရာဝန်။ ။ “ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ ခင်ဗျားကိုယ်မှတွေ့ တဲ့ ကုသဖို့ ဆေးမရှိတဲ့ ရောဂါဆန်းကို ကျနော်တို့ က ခင်ဗျားနာမည်နဲ့မှည့်လိုက်တယ်ဗျာ။ ခင်ဗျား ဂုဏ်ယူပါဗျာ။ ခင်ဗျားနာမည် သမိုင်းမှာ တွင်ကျန်ခဲ့မှာပါ” တဲ့လေ။
Posted by Shankalay or Sai Sai at 6:24 AM No comments:
ဆရာမ။ ။ “ တိရစ္ဆာန်နဲ့ လူ ဘယ်သူက ပိုပြီးအသိပညာရှိသလဲ ဆိုတာကို ဘယ်သူဖြေနိုင်လဲ?
ကျောင်းသားတစ်ယောက်က လက်ညှိးထောင်ကာထ၍ ပြန်ဖြေလေသည်မှာ............
ကျောင်းသား။ ။ “တိရစ္ဆာန်က ပိုပြီး အသိပညာရှိပါတယ်ခင်ဗျာ”
ဆရာမ။ ။ “သားက ဘာလို့ အဲလိုထင်တာလဲ?”
ကျောင်းသား။ ။ “ အော်... ကျနော့်ခွေးကို ဟိုဟာလုပ်ခိုင်း..ဒီဟာလုပ်ခိုင်းတိုင်း သူက အားလုံးလိုလိုကို နားလည်တယ်ဗျ”
ဆရာမ။ ။ “အဲဒီတော့.......”
ကျောင်းသား။ ။ “ ဒါပေမယ့် သူကျနော့်ကို ပြန်ပြောတဲ့အချိန်မှာ ကျနော်ဘာမှ နားမလည်ဘူးဗျ” တဲ့လေ..
Posted by Shankalay or Sai Sai at 6:12 AM No comments:
ချစ်တာနဲ့ကြိုက်တာ ကွာခြားချက် (မိန်းကလေး သဘာဝ ?)
- ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့တွေ့ ရင် နှလုံးခုန်နှုန်းမြန်တယ်တဲ့
- ကိုယ်ကြိုက်တဲ့သူနဲ့ တွေ့ တော့ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးတယ်။
- ကိုယ်ချစ်တဲ့သူရဲ့မျက်လုံးခြင်းဆိုင်ရင်တော့ ကိုယ်က မျက်နှာနီပြီး
- ကိုယ်ကြိုက်တဲ့သူနဲ့ ကြတော့ အပြုံးတွေဝေတတ်တယ်။
- ကိုယ်ချစ်တဲ့သူရဲ့ ရှေ့ မှာ ရင်ထဲကစကားတွေကို အားလုံးမပြောနိုင်ဘူး
- ကြိုက်တဲ့သူနဲ့ ကြတော့ အားလုံးပြောထွက်တယ်။
- ကိုယ်ချစ်တဲ့သူရဲ့ ရှေ့ မှာ ကိုယ်ကရှက်နေတတ်ပြီး
- ကိုယ်ကြိုက်သူရဲ့ ရှေ့ မှာတော့ အဲလိုမဟုတ်ပြန်ဘူး။
- ချစ်တဲ့သူနဲ့မျက်လုံးချင်းမဆိုင်ရဲဘူး
- ကြိုက်တဲ့သူနဲ့ ကြတော့ မျက်လုံးချင်းရင်ဆိုင်ရဲတဲ့အပြင် ပြုံးပြနိုင်တယ်။
- ကိုယ်ချစ်တဲ့သူ ငိုတဲ့အခါ ကိုယ်က လိုက်ပြီးငိုတယ်
- ဒါပေမယ့် ကြိုက်တဲ့သူ ငိုတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်က ဖေးမတယ်။
- အချစ်က မျက်လုံးကစတင်ပြီး
- ကြိုက်တာက နားကနေစတင်တယ်ဆိုပဲ။
ရှမ်းကလေး (ရေးတဲ့သူက မိန်းကလေးဆိုတော့ မိန်းကလေးရဲ့ သဘောသဘာဝ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဗျာ။ ကျနော့်အတွက်တော့ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူဆိုရင် မျက်လုံးချင်းဆုံနိုင်တယ်လေ။ မျက်လုံးချင်းဆိုင်လေ ရင်ခုန်လေပေါ့ဗျာ။ ဟဲဟဲဟဲ...)
Posted by Shankalay or Sai Sai at 5:59 AM No comments:
ဇင်းမယ်ရောက်တုန်း သူများလုပ်ကျွေးလို့ သိလာတာလေ။ လုပ်ကူရင်းနဲ့ သိလာတာပေါ့။ ဒါကြောင့် ပြန်ပြီးပါးလိုက်ပါတယ်။ လုပ်နိုင်ရင် လုပ်စားလို့ ရအောင်ပေါ့ဗျာ။
၁။ ။ ၀က်ဦးနှောက်
၂။ ။ ၀က်အသည်း
၃။ ။ စမှုံစပါး (အစိမ်း)
အဲ ၀က်ဦးနှောက်လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ မလန့် သွားပါနဲ့ ။ ၀က်ဦးနှောက်မရှိရင် ထိုဖူးရောလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၀က်ဦးနှောက်တော့ ပါရပါမယ်။
၁။ ။ ၀က်ဦးနှောက်နဲ့ဝက်အသဲကိုကျက်အောင် ပြုတ်လိုက်ပါ။ (၀က်ဦးနှောက်ကိုတော့ ကြွတ်ကြွတ်အိပ်ထဲထည့်ပြီး ပြုတ်ပေါ့လေ။ မဟုတ်ရင် ရေနဲ့ အတူသမသွားပြီး ၀က်ဦးနှောက် ဟင်းရည်ဖြစ်သွားမယ်ဗျ။ )
၂။ ။ ပြုတ်ပြီးသွားရင်တော့ ကြေညက်အောင် တောက်တောက်စင်းရပါတယ်။ ငရုတ်သီးကြိတ်စက်နဲ့ ကြိတ်ရင်တော့ အဖတ်လိုက် ဖြစ်လို့တောင်တောက်စင်းတာက ပိုပြီးကောင်းပါတယ်။
၃။ ။ တောက်တောက်စင်းပြီးရင် အပေါ့အငန်ကို ကြိုက်နှစ်သက်သလို ထည့်ပါ။ ပြီးရင်တော့ သေးသေးလေးစင်းထားတဲ့ စမှုံစပါးရွက် ကို အပေါ်က ဖြူးပေးလိုက်ရင်တော့ အောက်က ပုံအတိုင်းရပါလိမ့်မယ်။ အဲ သံပုရာသီးနဲနဲ ညှစ်ထည့်လိုက်ရင်တော့ ခပ်ချဉ်ချဉ် အရသာ ရပါလိမ့်မယ်ဗျာ။
စားနည်းကတော့ ပိုပြီးတော့တောင်လွယ်ပါတယ်။ အောက်ကအတိုင်းတွဲပြီးစားရတယ်လေ။ မှန့် တီ၊ ၀က်ကြော် နဲ့ကော်ဖီထုပ် တွေပါ။
ကဲ...ဒီလိုထည့်စားတာပေါ့ဗျာ။ ရှိတာအားလုံးထည့်ပြီး ကျနော်တို့ လုပ်ထားတဲ့ဟာကို အပေါ်က ဖြူးပြီးစားရတာပေါ့။ အဲ...........အဲဒီတုန်းက အသားကိုပဲ ကြည့်နေလို့ လားမသိဘူး... အရွက်များများထည့်ဖို့ မေ့သွားတယ်ဗျာ... ဟဲဟဲ။
ရှမ်းကလေး (လေ့လာခွင့်ပေးသော မိုင်းပန်မှ သူငယ်ချင်းအားလုံးအား အထူးကျေးဇူးတင်လျက်)
Posted by Shankalay or Sai Sai at 6:54 AM No comments:
မိန်းမ၏မျက်နှာမီးလှောင်သဖြင့် ထိုဒဏ်ရာကိုဆေးကုသရန် ယောင်္ကျားဖြစ်သူက ဆရာဝန်ဖြင့်တိုင်ပင်လေသည်။
ဆရာဝန်။ ။ “ခင်ဗျားရဲ့အမျိုးသမီးက အရမ်းပိန်နေတယ်ဗျ။ ဒါကြောင့် တခြားနေရာက အသားကို ခွဲပြီး အစားထိုးဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားရဲ့တင်ပါးက အသားကိုပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ကုသဖို့ လွယ်ကူပါလိမ့်မယ်။ ”
ယောင်္ကျား။ ။ “ဟာဒါတော့ ရပါတယ်ဆရာ။ ဒါပေမယ့်....”
ဆရာဝန်။ ။ “ဒါပေမယ့်..”
ယောင်္ကျား။ ။ “ဆရာ့အနေနဲ့ဒီကိစ္စဘယ်သူ့ ကိုမှ မပြောပါဘူးလို့ကတိပေးရမယ်။ ကျနော့်မိန်းမကိုပါ မပြောရဘူး။”
ဆရာဝန်။ ။ “ရပါတယ်ဗျာ။ လူနာရဲ့ တောင်းဆိုချက်နဲ့အချက်အလက်တွေကို ကျနော်တို့ အပြင်မပေါက်ကြားစေရပါဘူး။ ”
ယောင်္ကျား။ ။ “ဒါဆိုရင် ခွဲစိတ်လို့ ရပါပြီဆရာ”
သို့ နှင့် ယောင်္ကျား၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ခွဲစိတ်ကုသမှုမှာ အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားခဲ့သည်။ ထိုခွဲစိတ်ကုသမှုကြောင့်ပင် မိန်းမဖြစ်သူမှာ ပိုမို၍နုပျို ချောမောလာသဖြင့် ရပ်နီးရပ်ဝေးမှာ သူငယ်ချင်း၊ ဆွေမျိုးများ မပြတ်လာရောက် လည်ပတ်သတင်းမေးကြလေသည်။
ထို့ ကြောင့်မိန်းမဖြစ်သူက ယောင်္ကျားဖြစ်သူအား
မိန်းမ။ ။“ ဒီတစ်ခေါက် ရှင်ကျမအတွက် အနစ်နာခံခဲ့တာကို ဘယ်လိုကျေးဇူးတင်ရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူးရှင်။ ”
ယောင်္ကျား။ ။ “ရှင်မကလဲ ကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူးကွာ။ မင်းရဲ့ ပါးကို မင်းအမေနမ်းလိုက်တဲ့အချိန်တိုင်း မင်းကျေးဇူးတင်တာထက် ကိုယ်က ပိုလို့ တောင်ဝမ်းသာနေပါတယ် ရှင်မရယ်”
(အော်...မိန်းမပါးကို နမ်းတာက ယောင်္ကျားရဲ့ တင်ပါးကို နမ်းတာနဲ့အတူတူဖြစ်နေတာကိုး)
Posted by Shankalay or Sai Sai at 6:25 AM No comments:
အတာ သင်္ကြန်မှာ အားလုံးပျော်ရွှင်ပါစေလို့ကျနော်ဒီကနေ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာ။ သင်္ကြန်အပြီးမှာ ဓါတ်ပုံလေးတွေတင်ပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Posted by Shankalay or Sai Sai at 3:17 AM No comments:
လေထဲလွင့်ပျံ ဆံနွယ်များနဲ့ 
ဆံနွယ်ဟာလဲ မြူးတူးစွာနဲ့ 
ပျောက်ကွယ်ခဲ့တယ် လေနဲ့ အတူ။
Posted by Shankalay or Sai Sai at 8:50 AM No comments:
ဆယ်ကမ္ဘာဒီတစ်သက် ငါ့ရင်နဲ့ စိတ်မှာ
အမြင်ချင်ဆုံးဟာ မတွေ့ နိုင်တော့တဲ့မင်း
Posted by Shankalay or Sai Sai at 10:10 AM No comments:
အချစ်ချစ်လို့တမ်းတရွတ်ဆို
ဘ၀မအောင် လူ့ ဘောင်တွေမှာ
သုံးမရတာ တွေ့ ဖူးခဲ့တယ်။
ဒီလူ့ ဘောင်မှာ ကြုံဖူးခဲ့တယ်။
Newly wed, Nearly Die တွေလဲကြုံဖူးတယ်။
ဘ၀တိုင်းရဲ့တစ်စိတ်တလေ
အထီးကျန်လို့အဖော်ကိုရှာ
Posted by Shankalay or Sai Sai at 9:58 AM No comments:
နေ့ မှထမင်းစား ညကျတော့နား
ကလေးမွှေးလို့သွေးစပ်လိုက်တော့
ပြောတိုင်းလိုက်လုပ် တွေ့ တိုင်းလိုက်တု
ရှေ့ လူကိုကြည့် နောက်လူကိုမေ့
ငနွားပေလို့ကျမ်းမှာမှတ်တယ်။
Posted by Shankalay or Sai Sai at 9:46 AM No comments:
တွေ့ ဆုံကြုံကွဲ လူတွေဟာလဲ
ခံစားချက်နဲ့မှတ်ဥာဏ်တွေက
လူတိုင်းရင်မှာ သံယောဇဉ်ရဲ့ 
နှောင်ကြိုးတွေက ဖွဲ့ နှောင်လို့ ပါ
ရှင်နေသရွှေ့ဘ၀မှာလဲ
Posted by Shankalay or Sai Sai at 7:52 AM No comments:
ရံဖန်ခါမှာ တွေ့ မိချိန်လေး
အသဲခိုက်လို့လွှမ်းမိတယ်လေ။
မင်းရဲ့ မျက်နှာ မမြင်ချင်ပါ။
တွေးပုံရိပ်မှာ မဆိုင်စွာနဲ့ 
မင်းရဲ့ မျက်နှာ ပျက်စီးသွားအောင်
လှမ်းပေါက်မိတယ်... အမှန်းများနဲ့ ။
Posted by Shankalay or Sai Sai at 9:54 AM No comments: